प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्न बाबुराम र उपेन्द्र तयार , माधव नेपाल पछि आउने ! – hamrosandesh.com
प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्न बाबुराम र उपेन्द्र तयार , माधव नेपाल पछि आउने !
तर,पछिल्ला राजनीतिक घटना क्रम हेर्ने र जानकारहरुको कुरा मान्ने हो भने उनका कुरामा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छ । जानकारी अनुसार खनाल–नेपाल समुह, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको वावुराम–उपेन्द्र समुह विच एकिकरणको प्रयास भईरहेको जानकारी वाहिरिएको छ ।
समानान्तर कमिटी, एकतर्फी कार्यकर्ता भेला लगायतका गतिविधि पनि सल्लाहमै भएको श्रोतको दावी छ । ‘ओली र नेपालविच निकै पुरानो इगो छ। सम्वन्धमा यति साह्रो तिक्तता आएको छ की, उनीहरु अव एक ठाउँमा वस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’ श्रोत भन्छ–‘त्यसैले पार्टी फुट्न सामान्य कुरा भएको छ। अर्कोतर्फ केपी ओलीले पनि पार्टी फुटवाट वचाउने खालका गतिविधि गरेका छैनन् । उनका क्रियाकलाप पनि नेपाल समुह निस्केर गएको वेस भन्ने खालका छन् ।